कक्षा ५ मा पढ्ने बालकले आफ्नै महिला प्रिन्सिपलसँग माया बसेर लेखे यस्तो प्रेमपत्र, जस्ले पाए यस्तो स´जाए ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कक्षा ५ मा पढ्ने बालकले आफ्नै महिला प्रिन्सिपलसँग माया बसेर लेखे यस्तो प्रेमपत्र, जस्ले पाए यस्तो स´जाए !
आधा पाकेको सुँगुरको मासु खाएको एक महिनापछि व्यक्तिको शरीरभरी भेटिए ७ सय फित्ते जुका नपाकेको मासु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । जुनसुकै जिवको मासु राम्रोसंग पाकेको छैन भने त्यसले मानिसको पाचन प्रकृया लगायत अन्य स्वास्थ्य समस्या उब्जाउँछ । त्यस्तै सुँगुरको मासु खानेबेलामा पनि निकै बिचार पुर्याउनु पर्छ । राम्रोसंग नपाकेको सुँगुरको मासु खाएका एक ब्यक्तिको शरिरमा आएको अचम्मको स्वास्थ्य समस्याले अहिले मासु खानेहरुका लागि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था निम्त्याएको छ ।
डाक्टरका अनुसार झु टिनिएसिसबाट पीडित थिए । यो भित्ते जुका टिनिया सोलियम संक्रमणबाट हुने रोग हो । भित्ते जुकाको लार्भा राम्रोसँग नपाकेको सुँगुरको मासुमार्फत् शरीरभित्र पुग्छ । यसका साथै यो दुषित खानामार्फत् पनि शरीरभित्र पुग्ने गर्छ । संक्रमण भएको अवस्थामा अत्यधिक टाउको दुख्ने, अँध्यारो छाउने, अट्याक हुने, बिर्सनेलगायतका लक्षण देखिन्छन् । अहिले ति ब्यक्ति स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । । डा। हुआंगका अनुसार एन्टी प्यारासाइटिक औषधी मार्फत ति जुका र लार्भालाई नष्ट गरेर बिरामीको उपचार गरिएको हो । फोन गर्न दुई घण्टा हिँडेर अग्लो डाँडा पुग्नुपर्ने बाध्यता
उहाँले भन्नुभयो, “मजस्तै यहाँका सबै व्यक्तिलाई फोन गर्न दुई घण्टा हिँडेर डाँडा चढ्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ, के गर्नु ? आफन्तको खबर सुन्न मन लाग्छ ।” डडेल्धुरा जिल्लाको भित्री मधेश क्षेत्रमा रहेको परशुराम नगरपालिका–८ मा पर्ने करेनी, जमरेनी र काँफलगैराका स्थानीयवासीहरुले फोन गर्नकै लागि घरबाट दुई घण्टा पैदल हिँडेरमाथि डाँडामा पुग्ने गरेको जाग्रीले बताउनुभयो ।
परशुराम नगरपालिका–८ का तीन वटा गाउँमा यस्तो समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यो पनि घाम लागेको बेला स्काइफोन लाग्ने र अन्य बेलामा त्यसमा पनि समस्या आउने गरेको उहाँले भन्नुभयो, “ऐनसेल र नमस्तेको मोबाइलको नेटकर्वमा झनै समस्या देखिएको छ ।” दैनिक फोनमा धेरै काम पर्छ, त्यसैले डाँडामा पुग्नु बाध्यता भएको उहाँको भनाइ छ । फोन नभएकाले स्थानीय सरकारका कामदेखि प्रहरी चौकीमा समेत सूचना आदान–प्रदान गर्न मुस्किल भएको छ ।
मायासँगै गए भन्दै साईप्रसबाट टिकटक भिडियो राखेकी नेपाली युवतीले जी’वनत्या’ग